Corso di birmano > italiano| Ristorante | Traduzione
Corso birmano - Ristorante
Il ristorante စားသောက်ဆိုင် - sɑ̄ thauʔ saiN
Vuoi mangiare? စားချင်ပြီလား။ - sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
Sì, ne ho voglia ဟုတ်ကဲ့ စားချင်ပါတယ်။ - hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
Mangiare စားမယ်။ - sɑ̄ mei
Dove possiamo mangiare? ဘယ်ဆိုင်မှာစားလို့ရမလဲ။ - bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
Dove possiamo pranzare? နေ့လည်စာ ဘယ်မှာစားလို့ရမလဲ။ - nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
La cena ညစာ - nya sa
La prima colazione နံနက်စာ - naN neiʔ sa
Per favore ! ခွင့်ပြုပါရှင် - kwoiN pyu pa shiN
Il menu per favore! မီနျူးလေးရနိုင်မလား။ - menu 'lei ya naiN me lɑ̄
Ecco il menu! ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ။ - hokʔ ké' di mha pa
Cosa preferisci? Carne o pesce? ဘာစားချင်လဲ၊ ငါးဟင်းလား၊ အသားဟင်းလား။ - ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
Con riso ထမင်းလည်းစားမယ်။ - tha miN 'lei sɑ̄ mei
Con pasta ခေါက်ဆွဲ လည်းစားမယ်။ - kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
Delle patate အာလူး။ - ah ū
Della verdura ဟင်းသီး ဟင်းရွက်။ - 'hiN thī 'hiN yoweʔ
Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ကြက်ဥအလုံးကြော်၊ ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ်။ - kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
Del pane ပေါင်မုန့် - paung moN'
Del burro ထောပတ် - tau baʔ
Un'insalata ဆလပ်ရွက် - sa laʔ yoweʔ
Un dolce အချိုပွဲ - ah cho pywei
Della frutta အသီးအနှံ - ah thī ah nhaN
Ha un coltello per favore? ဓားရှိသလား။ - dā shi' the lā
Sì, glielo porto subito အခုယူလာပေးပါမယ်။ - ah ku yu la ' pei pa mei
Un coltello ဓား - dā
Una forchetta ခက်ရင်း - keiʔ yiN
Un cucchiaio ဇွန်းတစ်ချောင်း - 'zouN thit chaung
È un piatto caldo? ဒီဟင်းကပူပူနွေးနွေးလား။ - di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
Sì, ed anche molto speziato! ဟုတ်ကဲ့၊ စပ်လည်းစပ်တယ်။ - hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
Caldo ပူတယ်။ - pu tei
Freddo အေးတယ်။ - 'ai tei
Speziato စပ်တယ်။ - satʔ tei
Prenderò il pesce! ငါးမှာမယ်။ - 'ŋa mha mei
Anch'io ကျမလည်းအတူတူဘဲ။ - kya ma 'lei ah tu tu bei